Ngwọta: avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ na Arduino - Ikkaro
Inicio >> Arduino >> Ngwọta: avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ na Arduino
N'isiokwu a, m ga-akọwa otu esi edozi njehie na Arduino:
avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ "/ dev / ttyACM0": A gọrọ ikike
Mgbe ogologo oge na-enweghị iji Arduino m na-m abụọ mbadamba (mbụ na Elegoo) imere nwa m nwanyi ihe ụfọdụ. M na-ejikọ ha, m ga-etinye ntabi ahụ iji hụ na ihe niile dị mma na mgbe m gara iziga ya na mbadamba ọ laghachiri njehie a maara nke ọma.
Arduino: 1.8.5 (Linux), Kaadị: "Arduino / Genuino Uno" avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ "/ dev / ttyACM0": Ikike ekweghị Nsogbu na-ebugote na bọọdụ. Gaa na http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload maka aro.
Ma na PC m ma laptọọpụ m arụnyere Ubuntu 18.04.
M na-amalite site na isoro ndị a jikọta na ị tụrụ aro m. M na-agbaso usoro ndị ahụ
En ngwaọrụ / efere Arduino / Genuino Uno ahọrọla
En ngwaọrụ / Oghere Usoro ahụ / dev / ttyACM0
ma dị ka akwụkwọ na-egosi, ọ bụrụ na enwere nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọ ala na ikikere, m na-emeghe ọnụ ma gbue:
ebe Nwunye Aha gị bụ aha njirimara gị
Ugbu a, m pụọ ma banye ọzọ. Ma ọ bụrụ na m malitegharịa PC / laptọọpụ.
Ọ ka anaghị arụ ọrụ maka m na akwụkwọ Arduino anaghị enyere m aka ọzọ. N'ihi ya, m nọ na-ele anya, na forums na blọọgụ. Ọ bụrụ n ’oge a ọ naghị arụ ọrụ maka gị ma ị dị ka m. Soro usoro ndị ọzọ
ls / dev / ttyACM0 laghachi / dev / ttyACM0
ls -l / dev / ttyACM0 laghachi crw-rw-- 1 mgbọrọgwụ dialout 166, 0 Nov 26 16:41 / dev / ttyACM
Site na nke a anyị na-akwado na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị
Anyị ga-enye ikikere ma lelee ma onye ọrụ anyị nwere ikikere ndị dị mkpa.
Ahụrụ m na onye ọrụ dị n'ime otu asụsụ ya mere akụkụ nke a anyị nwetara ya nke ọma.
Ihe na-arụrụ m ọrụ bụ ịwụnye Arduino.
Ọ bụrụ na ị nyochaa
Ma ọ laghachi ihe ọ bụla reinstalling Arduino ga-ofu.
O buru na inweghi ike idozi nsogbu a, hapuru m okwu, aga m agbali inyere gi aka.
BRR Tool Nchọpụta nsogbu
E nwere edemede ha akwadebe iji dozie nsogbu a. Nwere ike gbalịa ka ị mara ma ọ ga-enyere gị aka. Ejighi m ya ma ana m ahapụ ya n'ihi na echere m na ọ nwere ike ịba uru.
Ahapụrụ m ntakịrị ihe ọmụma iji ghọta nke ọma ihe AVRDUDE bụ. Aha a sitere na AVRDUDE - AVR Downloader / UploaDEr
AVRDUDE bụ ịba uru ibudata / ibu / jikwaa ihe ROM na EEPROM nke AVR microcontrollers na-eji usoro mmemme (ISP).
Brian S. Dean malitere AVRDUDE dị ka ọrụ nkeonwe dị ka onye mmemme maka Atmel AVR usoro nke microcontrollers.
Nwere ike ịchọta ngwanrọ na ọtụtụ ozi ndị ọzọ na ngo website.
Esi esi gbanwee tebụl site na PDF ka Excel ma ọ bụ CSV na Tabula
Heating blanket na germinate osisi
Categories Arduino Igodo bọtịnụ
Carolina Reaper ma ọ bụ Carolina Reaper
1 kwuru na "Ngwọta: avrdude: ser_open (): enweghị ike imeghe ngwaọrụ na Arduino"
Eprel 1, 2020 na 1:02 am
M nwere nsogbu na arduino otu ọ dịghị ekwurịta okwu na ide ma ọ bụ Anglịkan m nwere ihe niile nke ọma ahazi, niile n'ọdụ ụgbọ mmiri efere wdg ... m ebudatara tụgharịa ma amaghị m otú o si arụ ọrụ na Akwajuru femụwe na m na-eche bụ ihe dị njọ, ị nwere ike inwe ntakịrị nkọwa etu ị ga-esi rụnyeghachi arduino ekele m dị ọhụrụ na nke a
3 BRR Tool Nchọpụta nsogbu